Shumayela Iindaba Ezilungileyo Zobubele Obungasifanelanga | IMboniselo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
“[Nikela] ubungqina obucokisekileyo kwiindaba ezilungileyo zobubele obungasifanelanga bukaThixo.”—IZE. 20:24.
IINGOMA: 101, 84
Yintoni obufanele busikhuthaze ukuba siyenze ububele obungasifanelanga bukaYehova?
‘Iindaba ezilungileyo zoBukumkani’ zibubalaselisa njani ububele obungasifanelanga bukaThixo?
UYehova uza kububonisa njani ububele bakhe obungasifanelaga kwihlabathi elitsha?
1, 2. Umpostile uPawulos wabonisa njani ukuba wayebuxabisa ububele obungasifanelanga bukaThixo?
UMPOSTILE uPawulos watsho ngokunyaniseka ukuthi: ‘Ububele obungasifanelanga bukaThixo endabufumanayo abubanga lilize.’ (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 15:9, 10.) UPawulos wayeyiqonda kakuhle into yokuba wayengayifanelanga inceba kaThixo, ekubeni wayekade ewatshutshisa amaKristu.
2 Xa wayesele eza kufa, uPawulos wabhalela uTimoti wathi: “Ndinombulelo kuKristu Yesu iNkosi yethu, owandinika amandla, ngenxa yokuba wandigqala ndithembekile ngokundabela ubulungiseleli.” (1 Tim. 1:12-14) Babuyintoni obo bulungiseleli? UPawulos waxelela abadala bebandla lase-Efese oko kwakuqukwa bubo, wathi: “Andiwugqali njengothandekayo kum umphefumlo wam, ukuba nje kuphela ndinokuligqiba ikhondo lam nobulungiseleli endabamkelayo beNkosi uYesu, ukunikela ubungqina obucokisekileyo kwiindaba ezilungileyo zobubele obungasifanelanga bukaThixo.”—IZe. 20:24.
3. Bubuphi ubulungiseleli obukhethekileyo awabunikwayo uPawulos? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
3 Ziziphi ‘iindaba ezilungileyo’ awazishumayelayo uPawulos ezazibalaselisa ububele obungasifanelanga bukaYehova? Wathi kumaKristu ase-Efese: “Niye neva ngobugosa bobubele obungasifanelanga bukaThixo obanikwa mna ngokubhekisele kuni.” (Efe. 3:1, 2) UPawulos wayethunywe ukuba ashumayele iindaba ezilungileyo kubantu abangengawo amaYuda, ukuze nabo babe phakathi kwabo babeza kulawula noKristu kurhulumente woBukumkani bukaThixo. (Funda eyabase-Efese 3:5-8.) Ukushumayela kukaPawulos ngenzondelelo kwawamisela umzekelo omhle amaKristu anamhlanje, ibe kwakubonisa ukuba ububele obungasifanelanga bukaThixo kuye “abubanga lilize.”
NGABA UBUBELE OBUNGASIFANELANGA BUKATHIXO BUYAKUKHUTHAZA?
4, 5. Kutheni sinokuthi ‘iindaba ezilungileyo zoBukumkani’ zikwaziindaba ezilungileyo “zobubele obungasifanelanga bukaThixo”?
4 Kule mihla yesiphelo, abantu bakaYehova bathunywe ukuba bashumayele ‘iindaba ezilungileyo zoBukumkani kuwo wonke umhlaba, kube bubungqina kuzo zonke iintlanga.’ (Mat. 24:14) Ezi ndaba sizishumayelayo zikwabizwa ngokuba ‘ziindaba ezilungileyo zobubele obungasifanelanga bukaThixo,’ kuba zonke iintsikelelo esinethemba lokuzifumana phantsi kolawulo loBukumkani ziza kubakho ngenxa yobubele bukaYehova obuboniswa ngoKristu. (Efe. 1:3) Ngaba nathi, njengoPawulos, sibonisa umbulelo ngobubele obungasifanelanga bukaYehova ngokuthi sishumayele ngenzondelelo?—Funda eyabaseRoma 1:14-16.
5 Kwinqaku elingaphambili, sifunde ukuba aboni bangenelwa ngeendlela ezininzi kububele obungasifanelanga bukaYehova. Ngoko simele senze konke okusemandleni ethu ukwazisa bonke abantu ngendlela uYehova alubonisa ngayo uthando, noko bamele bakwenze ukuze bangenelwe kulo. Ziziphi iinkalo zobubele obungasifanelanga bukaThixo esimele sincede abanye baziqonde?
SHUMAYELA IINDABA EZILUNGILEYO EZINGEDINI LENTLAWULELO
6, 7. Kutheni sinokuthi, xa sichazela abantu ngentlawulelo sishumayela iindaba ezilungileyo zobubele obungasifanelanga bukaThixo?
6 Kweli hlabathi likavula-zibhuqe isono asisajongwa njengento embi, ngoko abantu abaninzi abasiboni isizathu sentlawulelo. Kwelinye icala, baya besanda abantu abayibonayo into yokuba ubomi bukavula-zibhuqe abuzisi lonwabo lokwenene. Ngaphambi kokuba badibane namaNgqina kaYehova, abantu abaninzi bebengasiqondi ukuba siyintoni isono, sisichaphazela njani, ibe yintoni esimele siyenze ukuze sihlangulwe ekukhotyokisweni siso. Abantu abanyanisekileyo bayakuvuyela ukufunda ukuba uYehova, ngenxa yothando lwakhe olukhulu nobubele bakhe obungasifanelanga, uye wathumela uNyana wakhe emhlabeni ukuze abe yintlawulelo yokusikhulula esonweni nakumphumo waso, ukufa.—1 Yoh. 4:9, 10.
7 UPawulos wabhala wathi ngoNyana othandekayo kaYehova: “Ngaye [uYesu] siye sakhululwa ngentlawulelo ngalo igazi lakhe, saxolelwa izigqitho zethu, ngokobutyebi bobubele bakhe [uYehova] obungasifanelanga.” (Efe. 1:7) Idini lentlawulelo likaKristu yeyona ndlela ibalaseleyo uThixo awabonisa ngayo ukusithanda kwakhe, ibe libonisa ubunzulu bobubele Bakhe obungasifanelanga. Hayi indlela ekusivuyisa ngayo ukwazi ukuba xa sibonisa ukholo kwigazi likaYesu elaphalalayo, ziya kuxolelwa izono zethu size sibe nesazela esicocekileyo! (Heb. 9:14) Ziindaba ezimnandi ngokwenene ezo esinokwabelana nabanye ngazo!
NCEDA ABANTU BABE NGABAHLOBO BAKATHIXO
8. Kutheni abantu abanesono bemele baxolelaniswe noThixo?
8 Sinembopheleleko yokwazisa abantu ukuba banako ukuba ngabahlobo boMdali wabo. Xa abantu bengabonisi ukholo kwidini likaYesu, uThixo ubajonga njengeentshaba zakhe. Umpostile uYohane wabhala wathi: “Lowo ubonisa ukholo kuNyana unobomi obungunaphakade; lowo ungamthobeliyo uNyana akayi kububona ubomi, kodwa ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe.” (Yoh. 3:36) Okuvuyisayo kukuba, idini likaKristu lenza abantu bakwazi ukuxolelaniswa noThixo. UPawulos wathi: “Nina enanikhe nangabahlukanisiweyo neentshaba ngenxa yokuba iingqondo zenu zazikwimisebenzi engendawo, uye ngoku waphinda wanixolelanisa ngomzimba wenyama walowo ngako ukufa kwakhe.”—Kol. 1:21, 22.
9, 10. (a) Yiyiphi imbopheleleko uKristu awayinika abazalwana bakhe abathanjisiweyo? (b) “Ezinye izimvu” zibancedisa njani abathanjiswa?
9 UKristu unike abazalwana bakhe abathanjisiweyo abasemhlabeni oko uPawulos akubiza ngokuba ‘bubulungiseleli boxolelaniso.’ UPawulos wabuchaza xa wabhalela amaKristu athanjisiweyo enkulungwane yokuqala esithi: “Zonke izinto zivela kuThixo, owasixolelanisa naye ngoKristu waza wasinika ubulungiseleli boxolelaniso, obu bokuba uThixo ngoKristu walixolelanisa naye ihlabathi, engazibaleli kubo izigqitho zabo, yaye walinikela kuthi ilizwi loxolelaniso. Ngoko ke singoonozakuzaku abasendaweni kaKristu, ngokungathi uThixo ebesenza isibongozo ngathi. Njengabasendaweni kaKristu siyabongoza sisithi: ‘Yibani ngabaxolelanisiweyo noThixo.’”—2 Kor. 5:18-20.
10 “Ezinye izimvu” zikujonga njengelungelo ukuncedisa abathanjiswa kobu bulungiseleli. (Yoh. 10:16) Njengoko zisebenza njengabathunywa bakaKristu, zineyona nxaxheba inkulu ekufundiseni abantu inyaniso, nasekubancedeni babe ngabahlobo bakaYehova. Le yinxalenye ebalulekileyo yomsebenzi wokunikela ubungqina obucokisekileyo kwiindaba ezilungileyo zobubele obungasifanelanga bukaThixo.
SHUMAYELA IINDABA EZILUNGILEYO ZOKUBA UTHIXO UYAYIVA IMITHANDAZO
11, 12. Kutheni kuziindaba ezilungileyo nje ebantwini ukwazi ukuba banokuthandaza kuYehova?
11 Abantu abaninzi bathandaza ukuze bazive ngcono, kodwa abayikholelwa ngokwenene into yokuba uThixo uyayiva imithandazo yabo. Bafanele bazi ukuba uYehova ‘nguMphulaphuli wemithandazo.’ Umdumisi uDavide wabhala wathi: “Owu mphulaphuli wemithandazo, abantu bayo yonke inyama baya kuza kuwe. Izinto ezisisiphoso zingqineke zinamandla kunam. Ke kona ukunxaxha kwethu, uya kukugubungela.”—INdu. 65:2, 3.
12 UYesu wathi kubafundi bakhe: “Ukuba nicela nantoni na egameni lam, ndiza kuyenza.” (Yoh. 14:14) Xa wathi “nantoni na,” wayethetha nantoni na evumelana nokuthanda kukaYehova. UYohane usiqinisekisa esithi: “Sinentembelo yokuba, kungakhathaliseki ukuba yintoni na esiyicelayo ngokuvumelana nokuthanda kwakhe, uyasiva.” (1 Yoh. 5:14) Hayi indlela ekukuhle ngayo ukufundisa abanye ukuba, umthandazo asiyonto nje ekwenza uzive ngcono, kodwa yindlela emangalisayo yokusondela “kwitrone yobubele obungasifanelanga” kaYehova! (Heb. 4:16) Ngokubafundisa ukuba bathandaze ngendlela efanelekileyo, bathandaze kuMntu ofanelekileyo, yaye bathandazele izinto ezifanelekileyo, sinokubanceda basondele kuYehova baze bathuthuzeleke xa bebandezelekile.—INdu. 4:1; 145:18.
UBUBELE OBUNGASIFANELANGA KWINKQUBO ENTSHA YEZINTO
13, 14. (a) Ngawaphi amalungelo akhethekileyo abaza kuwanandipha abathanjiswa kwixesha elizayo? (b) Nguwuphi umsebenzi omangalisayo abathanjiswa abaza kuwenzela uluntu?
13 UYehova uza kuqhubeka ebonisa ububele obungasifanelanga nasemva kokupheliswa kwale nkqubo ingendawo yezinto. Ebhekisela kwilungelo elikhethekileyo uThixo alinike abo bayi-144 000, abaza kulawula noKristu kuBukumkani basezulwini, uPawulos wabhala wathi: “UThixo, osisityebi ngenceba, ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo, wasenza saphila ndawonye noKristu, kwanaxa sasifile kwizigqitho—kambe ke niye nasindiswa ngenxa yobubele bakhe obungasifanelanga—yaye wasivusa ndawonye waza wasihlalisa ndawonye kwezasezulwini iindawo ngokumanyene noKristu Yesu, ukuze abubonakalise kwiinkqubo zezinto ezizayo ubutyebi obugqwesileyo bobubele bakhe obungasifanelanga, ngokusibabala kwakhe ngokumanyene noKristu Yesu.”—Efe. 2:4-7.
14 Asinakukwazi ukuzithelekelela izinto ezimangalisayo uYehova aza kuzenzela amaKristu athanjisiweyo xa ehleli ezitroneni ezulwini ukuze alawule kunye noKristu. (Luka 22:28-30; Fil. 3:20, 21; 1 Yoh. 3:2) UYehova uza kububonakalisa “ubutyebi obugqwesileyo bobubele bakhe obungasifanelanga” kuwo ngokukhethekileyo. Aza kubumba “iYerusalem entsha,” umtshakazi kaKristu. (ISityhi. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Aza kwabelana noYesu ‘ekuphiliseni iintlanga,’ ancede abantu abathobekileyo ukuba bakhululeke ekukhotyokisweni sisono nokufa, baze benziwe bafezeke.—Funda iSityhilelo 22:1, 2, 17.
15, 16. UYehova uza kububonakalisa njani ububele obungasifanelanga ‘kwezinye izimvu’ kwixesha elizayo?
15 Kwabase-Efese 2:7, sifunda ukuba uThixo uza kuqhubeka ebubonakalisa ububele bakhe obungasifanelanga ‘nakwinkqubo yezinto ezayo.’ Ngokungathandabuzekiyo, kwinkqubo entsha yezinto kaYehova kuza kubakho “ubutyebi obugqwesileyo bobubele bakhe obungasifanelanga.” (Luka 18:29, 30) Enye yezona ndlela zigqwesileyo obuza kubonakaliswa ngazo ububele obumangalisayo bukaYehova emhlabeni, iya kuba kukuvuswa kwabantu ‘emangcwabeni.’ (Yobhi 14:13-15; Yoh. 5:28, 29) Amadoda namabhinqa okholo amandulo awafa ngaphambi kokufa kukaKristu okulidini, kwakunye nabo ‘bezinye izimvu’ abafa bethembekile ebudeni bemihla yokugqibela, baza kuvuswa ukuze baqhubeke bekhonza uYehova.
16 Izigidi zabantu abafa bengazange bamazi uThixo, nazo ziza kuvuswa. Ziza kunikwa ithuba lokuzithoba kulongamo lukaYehova. UYohane wabhala wathi: “Ndababona nabafileyo, abakhulu nabancinane, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kodwa kwavulwa omnye umsongo; umsongo wobomi. Baza abafileyo bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo ngokwezenzo zabo. Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo abalapho, bagwetywa elowo ngokwezenzo zakhe.” (ISityhi. 20:12, 13) Noko ke, abo bavusiweyo kuza kufuneka bafunde ukuthobela imigaqo kaThixo eseBhayibhileni. Ukongezelela koko, kuza kufuneka bathobele imiyalelo emitsha eyingenelo eza kutyhilwa ‘kwimisongo’ echaza oko uYehova akulindeleyo kwabo baza kube bephila kwinkqubo entsha yezinto. Ukutyhilwa kwezinto ezibhalwe kule misongo, kuza kuba yenye indlela yokubonakaliswa kobubele obungasifanelanga bukaYehova.
QHUBEKA USHUMAYELA IINDABA EZILUNGILEYO
17. Yintoni esifanele siyikhumbule xa sishumayela?
17 Ngoku, njengoko isiphelo sisondela, sizimisele ngakumbi ukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani! (Marko 13:10) Ngokungathandabuzekiyo, iindaba ezilungileyo zibalaselisa ububele obungasifanelanga bukaYehova. Sifanele sikukhumbule oku xa sishumayela. Injongo yethu xa sishumayela kukuzukisa uYehova. Singakwenza oku ngokubonisa abantu ukuba zonke iintsikelelo uYehova azithembisayo kwihlabathi elitsha zibonisa ububele bakhe bothando.
Khonzani ngenzondelelo “njengamagosa amahle obubele obungasifanelanga bukaThixo.”—1 Pet. 4:10 (Jonga isiqendu 17-19)
18, 19. Sibuzukisa njani ububele obungasifanelanga bukaYehova?
18 Njengoko sishumayela kwabanye, sinokubachazela ukuba xa uKristu elawula eBukumkanini, abantu baza kunandipha iingenelo zokusebenza ngokupheleleyo kwedini lentlawulelo, yaye baza kuya befezeka ngokuthe ngcembe. IBhayibhile ithi: “Indalo ngokwayo iya kukhululwa ekukhotyokisweni kukonakala ize ibe nenkululeko ezukileyo yabantwana bakaThixo.” (Roma 8:21) Oku kuza kwenzeka kuphela ngenxa yobubele obugqithiseleyo bukaYehova.
19 Sinelungelo lokwabelana nabo bonke abasiphulaphulayo, ngesithembiso esibangel’ imincili esifumaneka kwiSityhilelo 21:4, 5, esithi: “[UThixo] uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule.” Yaye uYehova, lowo uhleli etroneni, uthi: “Khangela! Zonke izinto ndizenza ntsha.” Uphinda athi: “Bhala, kuba la mazwi athembekile yaye ayinyaniso.” Xa sizishumayela ngenzondelelo iindaba ezilungileyo kwabanye, ngokwenene sizukisa ububele obungasifanelanga bukaYehova!